Ụlọ ọrụ ọsọ ọsọ China Manufacturer
Nkọwa:Ụlọ ọrụ na-emepe ọnụ ụzọ,Nwepu ihe ntanetị ụlọ ọrụ,Ụlọ mbata akpaaka
Home > Ngwaahịa > Ọnụ Ụzọ Dị Elu > PVC High Speed ​​Door > Ụlọ ọrụ ọsọ ọsọ
PVC ọnụ ụzọ dị elu bụ ezigbo nhọrọ maka ụlọ ọrụ mmepụta ụlọ ọrụ gị, nke a na-ejikarị eme ihe na ụlọ ọrụ mmepụta ihe. Ha bụ nkwalite teknụzụ nke oghere ndị a maara n'ozuzu, ọnụ ụzọ PVC ma ọ bụ ndị na-ekpuchi windo. Ihe kachasị dị iche bụ na nrụrụ na-adịgide adịgide na-enye ọsọ ọsọ ka elu ma na-enwe ike ịdado ọnụ ọgụgụ dị elu nke usoro mgbagwoju anya (oghere mmeghe na mmechi) ma chọọ nkwụsị ala na nrụzi. Dabere na ngwa ngwa a chọrọ, a na-enwe ụdị ụzọ ụzọ eji arụ ọrụ ma ọ bụ vetikal. A na-eji ọnụ ụzọ dị elu eme ihe mgbe ọ bụla okporo ụzọ na-eme ma ebe ọnụ ụzọ ga-eme ihe ndị dị mkpa. N'ime ụlọ ọrụ nri na ihe ọṅụṅụ, ma ọ bụ ụlọ ọrụ ahụike dịka ọmụmaatụ, ọnọdụ ihu igwe pụrụ iche ga-emeri; mkpirikpi mmeghe na mmechi mmechi belata mmetuta oyi, zere ikuku ma mee ka usoro oru oma. A pụkwara ịhazi ha na akụkụ dị ukwuu maka ọrụ nsị na ụgbọelu.
Oyi Alusom Alloy Ngwa-ngwa Ozo Gbara Oke Ozo Kpọtụrụ ugbu a
Industrylọ ọrụ PVC Rapid Speed ​​Roll Up Door Kpọtụrụ ugbu a
N'ogbe Onu ogugu Anyi Mkpo Osa CE ROHS Kpọtụrụ ugbu a
Ihe PVC Ihe Omuma A Nabatara Maka Speedzọ Ọsọ Elu Kpọtụrụ ugbu a
Ụlọ ọrụ na-emepe ọnụ ụzọ Nwepu ihe ntanetị ụlọ ọrụ Ụlọ mbata akpaaka Ụlọ PVC na-emepe ọnụ ụzọ Nzukọ Ụlọ Ọrụ na-emepe Ọnụ Ụzọ Ụlọ ọrụ na-eji ọnụ ụzọ eme ihe Ime ụlọ na-emepe ọnụ ụzọ Mgbanwe ọsọ ọsọ na-emechi ọnụ ụzọ